अनौठो चलन जहाँ : आमाको सौता बन्न छोरीलाई बाध्य पारिन्छ – Saurahaonline.com
अनौठो चलन जहाँ : आमाको सौता बन्न छोरीलाई बाध्य पारिन्छ
सौराहा अनलाइन | २०७६, २८ बैशाख शनिबार
विवाहको प्राचीन कालदेखि चलिआएको एउटा संस्कार हो । विश्वकै पहिलो लिखित ग्रन्थ मानिने ऋग्वेदमा सूर्य र सूर्याको प्रसङ्गमा विवाह संस्कारका सबै वैदिक मन्त्र उल्लेख गरिएका छन् ।
विवाह संस्कारसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलाप ऋग्वेदमा उल्लेख छन् । अर्थात् विवाहको चलन त्यस बेला पनि प्रचलित थियो । चार वेदमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो अथर्व वेदमा पनि विवाह संस्कारबारे उल्लेख छ ।
मानव जीवनलाई आदर्श रूपमा सञ्चालन गर्न विवाहको चलन सुरु भएको हो । हिन्दू समाजमा आफ्नो सम्पत्ति अरूलाई दान दिँदा संकल्प पढेर विधिपूर्वक दिने चलन भएजस्तै कन्याका पिताले आफ्नी छोरी अरूलाई सुम्पँदा धार्मिक विधि अपनाउने गरिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, संसारमा विवाहलाई लिएर अनेक प्रथा प्रचलनमा छ । जुन सबै देशमा सामान्य रुपमा लिन सम्बभ हुँदैन ।
त्यस्तै प्रचलन छ बंगलादेशमा । जहाँका एक जनजातिको विवाहको प्रचलन निकै अनौठो छ । उनीहरुको प्रचलन अनुसार छोरीलाई नै आमाको सौता बन्न बाध्य पारिन्छ ।
बंगलादेशको दक्षिण पूर्व माधोपुर जंगलमा बासोबास गर्दै आएका वाली मन्डी जनजातिमा यो परम्परा रहेको छ । जहाँ आमा र छोरी दुवैले एउटै पुरुषसँग विवाह गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । यदि कुनै महिलाको पतिको मृत्यु पहिले भयो भने उनले आफ्ना पतिको परिवारका कुनै एक सदस्यसँग विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, यदि कुनै महिलाको श्रीमानको कम उमेरमा नै निधन हुन्छ र उनकी छोरी हुन्छिन् भने उनीहरुको एउटै मण्डपमा एकै पतिको साथमा विवाह गरिन्छ । ती छोरी सानैदेखि नै पितासँग विवाह गर्ने सपना देख्ने गर्छिन् किनकी उनको समुदायको विवाहको प्रथा नै त्यस्तै रहँदै आएको छ ।
यो परम्परा सम्पत्तिको अंशबन्डा रोक्नको लागि निभाउने गरिन्छ । यस समुदायको मुखिया महिला हुने चलन रहेको छ । यदि कुनै युवतीले यो परम्परा तोड्ने प्रयास गरेमा सजाय दिने गरिन्छ । र, उनलाई समाजबाट निकाला गरिन्छ ।
छोरीलाई आमाले नै यस्तो परिस्थितीमा पुर्याउँछिन् कि उनी आफ्ना सौताने पिताका साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाउँन बाध्य हुन्छिन् । ऐजेन्सी
कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन ६६ अर्ब पुनरकर्जा स्वीकृत २०७७, १९ मंसिर शुक्रबार
सत्तारुढ नेकपामा विवाद चकिएसंगै राष्ट्रपति भण्डारीसँग अध्यक्षद्वयको छुट्टाछुट्टै भेट २०७७, १९ मंसिर शुक्रबार
इच्छाकामना पञ्चमी मेला स्थगित २०७७, १९ मंसिर शुक्रबार
आजको मौसम : केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना २०७७, १९ मंसिर शुक्रबार
कोरोना बिमाको भुक्तानी ३ दिनभित्रै दिनु ः अर्थमन्त्रालय २०७७, १९ मंसिर शुक्रबार
तपाईको यस्तो छ भाग्यफल ? २०७७, १९ मंसिर शुक्रबार
आजको मौसम : केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना
चितवन ः आज सामान्यतय मौसम सफा रहने जनाइएको छ । देशभरको मौसममा प्रभाव पार्ने उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव.....
तपाईको यस्तो छ भाग्यफल ?
संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘गाँजा’ बहस : नार्कोटिक ड्रगसहितको प्रतिबन्ध हट्यो, खेती गर्न सहज
बाइडेनलाई प्रभावमा पार्न चिनियाँ एजेन्टहरू सक्रिय रहेको अमेरिकी गुप्तचरको आरोप
शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र संचालनबारे छलफल
चितवनका १४ मध्ये ७ क्रसरउद्योग विना दर्ता संचालनमा
प्रधानमन्त्री केपी ओली लोकतन्त्रका लागि नभइ ज्यान मुद्दामा १४ वर्ष जेल : नेता रामचन्द्र
निन्द्रामा घुर्ने समस्या छ ? यसरी गरौँ समाधान
गोरखामा छोराले गरे अाफ्नै बुबाको हत्या
२५ किलो लागूऔषध गाँजासहित पक्राउ